Esports Europe dia misafidy an'i Bruxelles ho an'ny foiben'ny federasiona
Home » Lahatsoratra farany farany » Sports » Esports Europe dia misafidy an'i Bruxelles ho an'ny foiben'ny federasiona
Associations News • Vaovao Mafana Belzika • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • Sports • teknolojia • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Vao nisafidy ny sehatry ny serivisy fanentanana Brussels ho an'ny foiben'ny federasiona eropeana. Ho fanampin'ny lafiny iraisampirenena eto an-tanàna, ny traikefan'ny fikambanana iraisam-pirenena sy ny sehatry ny audiovisual ara-pahasalamana eo an-toerana dia nandray anjara tamin'ity fanapahan-kevitra ity izay hamafisina amin'ny kaongresy mpanorina voalahatra ny volana febroary 2020 any Bruxelles.
Taorian'ny antso ho an'ny fangatahana tamin'ny volana septambra izay nandraisan'i Bruxelles anjara dia nisafidy ny renivohitra eropeana ho an'ny foibeny ny komity anatiny Esports Europe. Antony maro no nanampiana ity fanapaha-kevitra ity: ny maha akaiky ny andrim-panjakana sy ny fikambanana eropeana sy iraisam-pirenena politika, ny fisian'ireo mpiantsehatra amin'ny indostrian'ny esports marobe ary ny tontolon'ny lalàna izay ankafizin'ny fikambanana.
“Androany, afaka manambara amin'ny fomba ofisialy isika fa nandresy! Vonona handeha lavitra kokoa izahay ary faly manohy ny fiaraha-miasa amin'ny faritra Bruxelles-Capital hampiseho ny renivohitra eropeana ho toy ny faritra vaovao mandrisika ny fandraharahana ary ivon'ny foiben'ny Esports Europe, "hoy i Samy Bessi, lefitra- Filohan'ny Federasiona Espaniola Federaly.
“Faly izahay mandray an'i Esports Europe, fikambanana vaovao iray izay miresaka amin'ny tanora eropeana ny raison d'étre. Ny fikambanana dia manatevin-daharana ireo fikambanana 2250 efa misy ao Bruxelles. Ity vaovao ity dia manamafy ny satan'ny faritra misy antsika ho renivohitry ny fikambanana iraisam-pirenena manerantany ”. Rudi Vervoort, Minisitry ny Filohan'ny Bruxelles-Capital Region
“Faly sy mirehareha aho fa afaka mametraka ny tenany eo amin'ny sarintany i Bruxelles. Ny renivohintsika dia kely amin'ny sehatra manerantany fa voaporofo fa mitondra valiny ny fisainana 'ivelan'ny boaty'. Tsy nitsaha-nitombo i Bruxelles ho renivohitra teknolojia, anatiny sy ivelan'i Eropa. Izay mahasoa ny tanàna sy ny mponina any Bruxelles. Ny fanekena iraisam-pirenena azontsika an-tampon'izany dia bonus. Amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo antoko voarohirohy dia hanohy hieritreritra, hanavao, hamorona ary hisarika tetikasa izahay amin'ny taona ho avy. ” Said Pascal Smet, sekreteram-panjakana ao amin'ny faritra Bruxelles-Capital, tompon'andraikitra amin'ny fifandraisana eropeana sy iraisam-pirenena.
Amin'ny alàlan'ny fifindrana any Bruxelles, ny federasiona dia hiditra amin'ny "ecosystem" lehibe indrindra amin'ny fikambanana miaraka amin'ny fikambanana iraisam-pirenena maherin'ny 2,250. Fahafahana lehibe hihaonana amin'ireo solontenan'ny sehatra hafa, hizara azy ireo ny zavatra niainany, ary amin'izany hiantohana ny fampandrosoana ny indostrian'ny fanatanjahantena elektronika. Io ihany koa no toerana mety indrindra hifaneraserana amin'ireo mpanapa-kevitra lehibe amin'ity sehatra ity.